WARBIXIN: Mushahar 7 Milyan oo Euro ah ayuu ka doortay xulka qaranka Talyaaniga!! – Gool FM
(Rome) 18 Luulyo 2021. Warbixintan waxa ay ku saabsan tahay Tababare Roberto Mancini; macallinka loogu yeero Boqorka degganaanta ee xulka qaranka Talyaaniga 53 sanadood kaddib u horseeday Guushii Koobkii Qarammada Yurub ee 2020 iyo sidii uu shaqada tababarenimo ee Talyaaniga uga doortay shaqo ka mushaar badnayd oo uu sanadkii ku qaadanayay 7 Milyan oo Euro.
Bishii May 2018-kii ayay ahayd markii Roberto Mancini loo magacaabay xilka tababarenimo ee xulka Talyaaniga, waqtigaas oo Talyaanigu uu ka haray Koobkii Adduunka ee sanadkaasi kaddib markii uu u soo gudbi waayay, taasoo ahayd dharbaaxo aad u kulul oo ku dhacday Azzurri, maadaama ay markii ugu horreysay 59 sanadood kaddib ka qayb geli waayeen Koob Adduun.
Roberto Mancini waxa uu howsha ka billaabay meel eber ah, mana jirin cid aamini kartay in sanadkan xulka Talyaanigu ku guuleysan karay Koobkii Qarammada Yurub, laakiin Mancini waxa uu aaminsanaa in xiddigihiisu ay guul keeni karaan, taasna waxaa u daliil ah muuqaalkii ku saabsanaa hadalkii uu u jeedinayay ciyaartoyda Talyaaniga ka hor kulankii kama dambeysta ahaa ee Wembley ee ay kula yeesheen xulka Ingiriiska.
Markii uu dejiyay kaartadii kama dambeysta ahayd ee ay ku dagaal galayeen kulankii Wembley waxa uu tababare Mancini oo la hadlayay ciyaartoyda Azzurri uu hadalkiisii ku soo koobay: “Halkan nasiib kuma joogno, annaga ayaana go’aamin karna masiirkeenna, walaa garsooreye, walaa kuwa nala tartamaya iyo cid kaleba ma go’aamin karto aayeheenna, hagaag, adinkuna waad garanaysaan waxaad sameyneysaan”.
Farxad geliyaha iyo boqorka degganaanta waa qaar ka mid ah magacyada loogu yeero Roberto Mancini oo degganaan iyo dhiirri gelin ku dhameystay tartankii Qarammada Yurub isagoo guul taariikhi ah u horseeday xulkiisa Talyaaniga.
Isla degganaantaas iyo taatikadiisa gaarka ah waa middii uu Mancini Naadiga Inter ugu horseeday ku guuleysigii Horyaalka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkii 2005-2006 markaas oo ay Inter ugu dambeysay inay Horyaal qaaddo 17 sanadood ka hor.
Sidoo kale Macallin Mancini waxa uu kooxda Manchester City la qaaday Horyaalkii Ingiriiska ee fal ciyaareedkii 2011-2012; kaasoo ahaa Horyaalkii ugu horreeyay ee ay kooxda Man City ku guuleysato 44 sanadood kaddib.
Waxaa intaa oo dhan ka qiimo badan in tababare Mancini uu iska casilay shaqadii tababarenimo ee kooxda Zenit Saint Petersburg ee waddanka Ruushka oo uu mushahar ahaan sanadkii uga qaadanayay 7 Milyan oo euro, taa beddelkeedana waxa uu ka doortay shaqada tababarenimo ee Talyaaniga ee mushaarkeedu yahay 2.5 milyan Euro ama labo milyan iyo bar.
Dhanka kale xulka Talyaaniga ayaa guushiisii Qarammada Yurub 2020 waxay kaga dhigan tahay in aan laga guuleysan 34 kulan oo ay dheeleen, iyagoo haatan ku socda inay jebiyaan rikoorka xulalka Brazil iyo Spain ee ah 35 kulan oo xiriir ah oo guuldarro la’aan ah.
Intii u dhexeysay 1935-1939-kii waxay ahayd xilligii ay ugu fiicnaayeen xulka Talyaaniga oo aan laga guuleysan 30 kulan oo xiriir ah, iyagoo 1938-kii qaaday Koobkoodii Adduun ee labaad, halka billad Dahab ahna ay heleen ciyaarihii Olombikada ee 1936-kii, balse Roberto Mancini ayaa haatan qoraya taariikhdii ugu nuurka badneyd xulka Qaranka Talyaaniga.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii aan kaga hadlaynay macallinka Talyaaniga ee loogu yeero Boqorka Aamusnaanta ee Talyaaniga u horseeday guushii weyneyd ee Koobkii Qarammada Yurub ee ay 3-2 rigooreyaal ah kaga qaadeen xulka Ingiriiska, waxayna ahayd markii labaad ee Talyaanigu uu qaado koobka Qarammada Yurub.